Namuhla emakethe zemithi Russia ezinikezwa amakhasimende balms Dikulja kwezinhlobo eziningana. Phakathi kwazo kunane-: "Temidlalo", "Umlayezo", "Winter", "Tibet". Nokho, isidingo esikhulu kunazo zonke phakathi abathengi abavamile (isb. Abasubathi E. Non-professional kanye nabantu abathakazelayo emidlalweni eyingozi) isebenzisa Dikulja namafutha ngoba emalungeni, umthengi izibuyekezo kubonisa ukusebenza high.
The main ingxenye Ukwakheka
Njengengxenye izidakamizwa - ngempela uhlu olude izingxenye, futhi cishe bonke bangabafundi odabuka yemvelo. Lapha kukhona ezidunjini ezomisiwe kanye propolis, ngengcina yezinyosi futhi Isihlungu akhiphe ukhunta bear Bile. Kukhona ingxenye namafutha uwoyela enziwe itiye esihlahleni futhi ulwandle-ijikijolo lingase namafutha ezikhishwe of amakhambi amaningi (ginkgo biloba akhiphe sembabazane, chamomile, celandine, Aloe, rose okhalweni).
Ngisho nakuleli namafutha Valentin Dikul (ngesandla iqukethe ulwazi oluphelele mayelana izidakamizwa) zihlanganisa glycerin, retinol futhi tocopherol, d-panthenol, vitanol, lanolin, futhi izakhi ezithile nezivimbelakuvunda.
Valentin Dikul - Rams, MD noprofesa - isungule indlela eyingqayizivele nephumelelayo yokutakula motor amakhono nemisebenzi umzimba womuntu yezifo eyinkimbinkimbi emalungeni, noma emva ingakuzwa umgogodla cord yokulimala nesineke.
Dikulja namafutha ngoba emalungeni (izimpendulo kwabathengi abahlinzeki - isiqinisekiso ngqo) ubhekwa ngempumelelo kuzo zonke izinhlobo ukulimala ngokuhlanganyela. Ukusetshenziswa leli thuluzi kuzosiza ukuvimbela ukuthuthukiswa izinkinga ezinjalo zemisipha kanye articular apharathasi njengoba samathambo kanye arthrosis, osteochondrosis futhi radiculitis. Ngaphezu kwalokho, lapho izinhlobo eziphambili sezifo ngenhla ebhalsamu anganikeza yalokho omuhle therapy eziyinkimbinkimbi.
Ngo ukusetshenziswa, nomuthi ukhiqiza umphumela anti-inflammatory kanye analgesic, kuthuthukisa kwegazi izitsha.
Ngaphezu kwalokho, Dikulja balsams ngoba emalungeni, okwenza intengo lezi imithi kufinyeleleke anhlobonhlobo abathengi, umfutho kanye lymph kwegazi, sikhuthaze izinqubo umzimba emzimbeni bese wenza kusebenze synthesis lwamalunga (joint) uketshezi. Ngaphezu kwalokho, lapho (balms) iqhaza etholakala usawoti imali, ngokushesha kuxazululwa focus ukuvuvukala futhi regenerates uqwanga.
Izindlela yokusebenzisa namafutha ngoba emalungeni
Ibhalsamu Dikul Umhlahlandlela uncoma kokubili izimo sibi, kanye nokuvinjelwa.
Ngo sciatica yansukuzonke, i-osteoarthritis, i-ubuhlungu emizweni neuralgic ejenti uhlamvu esetshenziswa izikhathi 2-3 emini, okubangela yayo ukukhanya-massiruyusche bezihlikihla ukunyakaza endaweni ethintekile imizuzu okungenani ezimbili. Emva inqubo, isikhungo ubuhlungu Kunconywa ukusonga a indwangu yoboya. Ubude Yiqiniso ukwelashwa - kusukela ngesonto inyanga nesigamu.
Ngezigaba acute arthritis, i-osteoarthritis, sifo Dikulja namafutha lokubuyekezwa ngokuhlanganyela iziguli nesiqondiso Ochwepheshe batusa nokuba ukukuthinta imizuzu 3-5 ngezikhawu nezinqubo ukuze kathathu ngosuku. Khona-ke ezisonga endaweni obuhlungu. Ukwelashwa Uthatha 2 amaviki kwinyanga nengxenye.
Uma kukhona ingozi acute (ngokujwayelekile ohambisana nesifanekiso hypothermia, abandayo, umthwalo okwandisa, amasosha omzimba ongaphakeme), ngamandla ukukuthinta Ukwakheka Kunconywa imizuzu emithathu ezonini ingozi. Phinda amaseshini ziyadingeka emini izikhathi 2-3.
Balms Dikulja "Radikulin" eziklanyelwe ekwelapheni sciatica. Umgomo we operation isekelwe Synergy izindlela (summation umphumela) umthelela zonke izingxenye zalo abamelwe: Isihlungu bee, athwale Bile, mummy, pepper, piyavita futhi lonke eziyinkimbinkimbi izitshalo zokwelapha.
Sciatica kuyinto yansukuzonke ngokwemvelo. Can avuse kuhlasela lutho: umthwalo ukwanda kanye zishintshe ngokushesha esiqwini, lokushisa ongaphakeme, okusalungiswa, hypothermia noma ukudakwa umzimba (izidakamizwa notshwala kuhlanganise).
Umthelela zemvelo izingxenye namafutha okuhloswe ngazo ukunciphisa ubuhlungu, ukucindezelwa ukuvuvukala kule izimpande emsipheni, inkanuko kwegazi futhi umzimba ku lesion focus. Lesi sidakamizwa sisiza ukukhulula imisipha, kuvusa ukusebenza izivikeli mzimba zendawo, sithuthukisa izivikelo antioxidant.
Ukusebenzisa "Radikulin" njalo, isiguli ngokushesha walulama yakhe umsebenzi motor nekhono ukusebenza, bakwazi ukuvimbela recurrences njalo.
Kungashiwo ukuthi izidakamizwa iyatholakala anhlobonhlobo amakhasimende amakhono ehlukene ngokwezimali. Ngokwesibonelo, i-tube 75 ml, okungukuthi emaphaketheni anjalo afumaneka okudayiswayo ngoba amalunga omzimba Dikulja balms, intengo ruble 220-240. Ukhilimu efanayo, kodwa inani 125 ml, zingathengwa for ruble 240-260.
Ibhalsamu "Radikulin" (umthamo - 100 ml), abathengi ungakwazi ukuthenga inethiwekhi zokwenza imithi ngenxa ruble 200-230. Ezinye izinhlobo balms ziyatholakala futhi ukuze amakhasimende. Ngokwesibonelo, 100 ml a namafutha massage futhi izobiza ruble 200-230 ezemidlalo Ukwakheka tube efanayo angathengwa ruble 185-205, no-100 ml "Tibet" namafutha - I-ruble 220-240.
"Winter" Dikul Amafutha emqulwini ka 200 ml izobiza ruble 220-245.
Abathengi asetshenziswa ngubani ukuba aphathe Dikulja namafutha ngoba emalungeni, izimpendulo muhle Nature Reserve. Ngokusho odokotela, hhayi kuphela ukuthi ejenti yenziwe ngezithako zemvelo, ephumelelayo futhi akubizi imali eningi, futhi ayinayo imiphumela eseceleni, okuyinto kuqinisekiswa imiphumela laboratory kanye izifundo zokwelapha, kanye neziguli ungenawo akhononde ukusabela ezingezinhle. Izimo, okuncane noma cha: ngeke sisetshenziswe kuphela uma hypersensitivity ngakunye izingxenye ezakha namafutha.
"Kardosal": imfundo manual, ukubuyekezwa, izincazelo, analogs